Rivetz စျေး - အွန်လိုင်း RVT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Rivetz (RVT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Rivetz (RVT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Rivetz ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $167 464.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Rivetz တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Rivetz များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RivetzRVT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00744RivetzRVT သို့ ယူရိုEUR€0.00628RivetzRVT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00566RivetzRVT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00677RivetzRVT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0668RivetzRVT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0468RivetzRVT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.165RivetzRVT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0277RivetzRVT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00989RivetzRVT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0103RivetzRVT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.166RivetzRVT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0576RivetzRVT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0398RivetzRVT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.557RivetzRVT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.25RivetzRVT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0102RivetzRVT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0112RivetzRVT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.232RivetzRVT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0517RivetzRVT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.785RivetzRVT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.82RivetzRVT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.89RivetzRVT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.546RivetzRVT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.206
RivetzRVT သို့ BitcoinBTC0.0000006 RivetzRVT သို့ EthereumETH0.00002 RivetzRVT သို့ LitecoinLTC0.000124 RivetzRVT သို့ DigitalCashDASH0.00007 RivetzRVT သို့ MoneroXMR0.00008 RivetzRVT သို့ NxtNXT0.533 RivetzRVT သို့ Ethereum ClassicETC0.00103 RivetzRVT သို့ DogecoinDOGE2.17 RivetzRVT သို့ ZCashZEC0.00008 RivetzRVT သို့ BitsharesBTS0.286 RivetzRVT သို့ DigiByteDGB0.275 RivetzRVT သို့ RippleXRP0.024 RivetzRVT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00025 RivetzRVT သို့ PeerCoinPPC0.0264 RivetzRVT သို့ CraigsCoinCRAIG3.31 RivetzRVT သို့ BitstakeXBS0.31 RivetzRVT သို့ PayCoinXPY0.127 RivetzRVT သို့ ProsperCoinPRC0.911 RivetzRVT သို့ YbCoinYBC0.000004 RivetzRVT သို့ DarkKushDANK2.33 RivetzRVT သို့ GiveCoinGIVE15.71 RivetzRVT သို့ KoboCoinKOBO1.61 RivetzRVT သို့ DarkTokenDT0.00685 RivetzRVT သို့ CETUS CoinCETI20.94